Environment, Disasters & Accidents Archives - Xinhua News Agency
လာဆာ၊ မေ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) မေ ၁၅ ရက် နံနက် ၁ နာရီ ခန့်တွင် “Jimu No. 1” type III လေသင်္ဘောကို ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၄,၂၇၀...
ချန်ရှား၊ မေ ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူနန်ပြည်နယ်၊ ချန်ရှားမြို့၊ ဝမ့်ချိန်ခရိုင်းအတွင်း ကိုယ်တိုင်ဆောက်လုပ်ထားသည့် လူနေအိမ်အဆောက်အဦတစ်လုံး ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပြိုကျသည့် အဆောက်အဦအတွင်း၌ ပိတ်မိသူ ၂၃ ဦးရှိပြီး အခင်းဖြစ်ပွားရာအနီးတွင် အခြားလူ ၃၉ ဦး အဆက်အသွယ်ပြတ် ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။ မေ ၅...
ချန်ရှား ၊ မေ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ်၌ (ကိုယ့်ဟာကိုယ်- ဆောက်လုပ်ထားသော) လူနေအဆောက်အဦတစ်လုံးပြိုကျမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၇၉ နာရီအတွင်း အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ ၈ ဦးအား အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့များကြားမှ ဆွဲထုတ် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အခင်းဖြစ်နေရာရှိ ဆင်ဟွာသတင်းထောက်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ချန်းရှ ၊ မေ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ်၌ ဧပြီ ၂၉ ရက်က မြေညီထပ်ကြမ်းခင်းအကျယ် ၇၀၀ မီတာခန့်ရှိသည့် “ကိုယ့်ဟာကိုယ်-တည်ဆောက်ထားသော” လူနေအဆောက်အဦတစ်လုံး ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အပျက်အစီးပုံများအကြား ပိတ်မိနေသူ ၅ ဦးကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် အခြား လူ ၂၃...
လားဆ၊ ဧပြီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ) “ကမ္ဘာမြေ၏ အိမ်ခေါင်မိုး”ဟု တင်စားခေါ်ကြသည့် တရုတ်နိုင်ငံ တိဗက်ဒေသတွင် အာရှတိုက် မြစ်ကြီး ၁၀ စင်း ၊ ရေကန်ပေါင်း ၁,၅၀၀ ကျော် ရှိသည်။ ယခုနှစ်ပိုင်းများတွင် တရုတ်နိုင်ငံ တိဗက်ဒေသ၌ ဂေဟလုံခြုံရေး ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း တည်ဆောက်မှုများ အဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။...
Environment, Disasters & Accidents4 weeks ago
နင်းပေါ ၊ ဧပြီ ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် နင်းပေါမြို့ ရှန့်ဆန်းခရိုင်၌ ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည် ဧပြီ ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် သောင်တင်နေသော ဝေလငါးတစ်ကောင်အား ပင်လယ်ထဲသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပျက်ကျသွားသောလေယာဉ်၏ ဒုတိယ Black Box ပြန်လည်တွေ့ရှိ
နန်နင်း ၊ မတ် ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီး(ကျွမ့်လူမျိုး)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၌ မတ် ၂၁ ရက်တွင် ပျက်ကျသွားခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းလေကြောင်းလိုင်းပိုင် လေယာဉ်၏ ဒုတိယ Black Box(ပျံသန်းမှုခရီးစဉ် အသေးစိတ် အကြောင်းအရာအလိုအလျောက် မှတ်တမ်းတင်ပေးသည့် စက်ကိရိယာ)အား မတ် ၂၇ ရက်တွင် ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားအရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေးဌာနချုပ်ထံမှ...